I-New Fairway Woods: Fumana 'Em Ngethuba Etshisayo
I-recentway fairway isinyithi kwimarike yegalufu
Yintoni entsha kwi-marketway marketwood market? Abaninzi begalufu bebeza kuba ngcono xa bebetha i-fairway wood kwi-tee kunokuba ngumqhubi: kulula ukulawula. Kodwa, ewe, siyaqonda - bonke abagadi begalufu bafuna ukuyixabela. I-fairway woods (okanye i-fairway zinyithi, njengoko ezinye iinkampani zinqwenela ukuzibiza) ziindawo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuhamba kwindlela ende.
Nanku ukukhangela kwezinye zezinto ezisemgangathweni zeenkuni zokubetha izitolo zangoku nje. (Ukukhutshwa okutsha kwongezwa phezulu.)
I-Cleveland Launcher HB
Ukujongwa kwabadlali begalufu "abakhetha ukuxolela amakilabhu aphakamisa ibhola ephakamileyo kunye ngqo" - ikhowudi yokugcoba kwegolati, abaphakathi kunye nabaphakamileyo abasebenzisekayo, nabani na abajolise umgama - i-Launcher HB fairway woods esuka eCleveland Golf iqaliswe ngokusemthethweni ngo-Sept. 15, 2017.
Isithsaba esihlaziyiweyo se-HiBore sixininisa ngaphezulu kwimpembelelo kwaye sinceda ukuhambisa ukuphakama okukhulu, ukuhlaselwa kwe-low-spin trajectory. I-Launcher HB fairways ine-ultralightweight hosel. Iiklabhu zikhululekile kwiimpawu zokulungelelanisa, u-Cleveland uthi, ngokuqhelekileyo bongeza ubunzima obukhulu kwaye badibanise i-golfer.
Bona i-clevelandgolf.com ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu. I-MAP yi-$ 219.99 yeqela ngalinye.
I-Ping G400 yeenkuni ezisemgangathweni ngoku inika ukhetho olungaphezulu kwezizukulwana zangaphambili zePing fairway woods: i-9-wood is available. Kukho ezintathu ze-G400 SFT fairway woods, apho "i-SFT" imele "ukuhamba ngokuthe ngqo," kwaye iilwimi zenzelwe ukunceda abagadi begalufu bahlale bekhupha i-shots online. Kodwa, linda, kukho ngaphezulu! Kukho i-Stretch 3-enkuni, ngabaphi abagadi begalufu abaninzi abaya kuthiwa ngu-3-wood wood or 3+ wood to deliver far distance.
Kuzo zonke, i-lofts ivela kwi-14.5 degrees kwi-3-enkuni (okanye i-degrees-13 xa ufuna ukuqala ngeStratch 3) ukuya kuma-23.5 degrees kwi-9-kuni, kwaye loo mihlaba ilungelelaniswa +/- 1-degree.
Zonke i-G400 fairways zijongene nensimbi yesininzi kwiimpahla zensimbi ezingenasici. I-MSRP yi-$ 287.50 yeqela ngalinye. Tyelela i-ping.com ngolwazi olungakumbi.
Intloko ye-Miura Hayate ye-fairway, ngakwesokudla (ecaleni kwintloko yentloko). IMira Golf
I-Miura Golf yakutshanje yiHoly fairway wood. (Oko kuchazwa ngokuthi "hi yaw tay," kwaye inkampani yaseJapan ichaza ukuba iguqulela "isandi somoya.")
Le mijelo ye-fairways inesakhiwo esisodwa, isakhiwo se-titanium. I-club yolwazi engacacanga kunye neendawo eziphantsi kweentlawulelo zikhuthaza i-angle ephezulu yokuqalisa kunye nokuxolelwa okukhulu.
Abadlali beGolfers banokuqwalasela le nsimbi ye-fairway yokudweba okanye ukutshabalalisa iindleko ngokuguqula izisindo kwisithende kunye neenzwane.
I-Miura Hayate i-woodway enqabileyo ifika kwi-lofts ye-15 ne-18 degrees, eneP MAP ye-$ 539 nganye. MiuraGolf.com
I-clubface kunye nenzwane ye-PXG 0341X yemithi yomthi. PXG
I-PXG 0341X i-fairway woods yandisa i-Parsons Xtreme Golf ye-0341 yangaphambili. Inkampani ithi iyanceda i-original "njengeqela lokudlala kubadlali abanqwenela ukuphambuka kwe-ultra-low, ngaphandle kokuxolela ukuxolelwa ."
I-0341X yemithi yamatye iyatholakala kwiimodeli ze-2-, 3-, 5-, kunye ne-7 (i-lofts ye-13, 15, 18 ne-21 degrees, ngokulandelanayo). Zine-fiber elula kakhulu i-carbon carbon kunye ne-honeycomb ye-TPE engenayo eyenza ukuba ivakale kwaye iphilile. Uyilo lobunzima oluphambili lubancedisa ukunciphisa izinga lokuhlahlela.
I- hopper eguquguqukayo inokwandisa okanye iyancipha i-lofts echazwe nge-1.5 degrees. Kwaye iisisithoba ezithintshayo eziqhelekileyo zodwa ziyakwazi ukuphucula izimo zokusungula okanye zibekwe ukutshabalalisa okanye ukudweba. I-MSRP yi-$ 640 nganye. pxg.com
XXIO Inkuni ye-Prime fairway, umzekelo we-2017. XXIO
I-XXIO Inqununu yokuqala yintsapho yeeklasi zegalufu ze-ultra-premium, kuquka ne-fairway woods.
I-XXIO I-Prime fairwayway imithi i-ultra-lightweight, i-titanium cup, kunye ne-clubhead aerodynamics kunye neendawo zokulinganisela zinceda ukuphakamisa i-angle engaphezulu.
Ezi klabhu ziza kunye ne-XXIO SP-900 i-graphite shaft kwaye zakhiwa ukukhuthaza ukuba yiyiphi i-XXIO inqumle "inamandla".
Ziza kwiimodeli ze-3-, ezi-5 kunye no-7 kwaye zaqala ngentengo ye-$ 579.99 nganye. XXIOUSA.com
I-Edge Exotics Ex10tics EX10. Umda woTyelelo
Intsha entsha ye-Tour Edge yeeklabhu yinkcazo ye-Exotics EX10, kwaye loo mgca iquka ezimbini zeenkuni ezifanelekileyo. Enye imodeli esemgangathweni, okwesibini yi-EX10 Beta.
Uphi umehluko? Imodeli ye-EX10 ye-Beta imane nje ijoliswe ngakumbi kwiigolisa ezingcono kwaye isebenzisa nje izinto ezimbalwa zeprayim. Oko kuthetha ukuba iindleko ezininzi, kunjalo. Ezinye zeengxaki ezithile:
Umgangatho we-EX10 fairway unombono weHT 980 weNkombe yeNsimbi; Imodeli yeBeta ine-910 yeBeta TI (titanium) ubuso bendebe.
Umzekelo osemgangathweni unesiprofayile se-aerodynamic clubhead kunye noyilo oluthile; Imodeli ye-Beta inesakhiwo esiphezulu somdwebo.
Imodeli esemgangathweni ine-21-gram yesisindo (kwisisindo esisodwa esitshintshileyo kunye nesigxina esisisigxina) kwindawo engqongileyo, ukunceda abagadi begolfu bafezekise i- angle ephezulu yokuqalisa . Imodeli ye-Beta ine-18 gram yesisindo esongezelelweyo kwedwa.
I-Exotics EX10 emgangathweni ephakamileyo yemithi ivela ezintlanganisweni ezinhlanu, ukusuka kwi-3-kuni ngamatye angama-7 (kuquka i-3+), ukusuka kwi-13 degrees ye-loft ukuya kwi-21, kwaye iqela ngalinye linama-MSRP e-$ 249.99. I-Exotics EX10 ye-Beta ye-woodway ekhuni ivela kwiindawo ezine, ukusuka kwi-13 ukuya kwe-18, kunye ne-MSRP ye-$ 299.99. touredge.com
Ibhodi yeBridgestone TourB XD-F fairway. IBridgestone Golf
I-XD-F fairway woods iyingxenye yeBridgestone Golf-premium ye-TourB intsapho yamaqela.
I-XD-F inobuso obungacacanga kunye nesimo sokubumbana, esenzelwe ukubhenela kubadlali begolfu abangcono. Enye yezinto zayo zobuchwepheshe zibizwa ngokuba yi "Power Rib Rib Technology." Isetyenziselwa ukunciphisa ukutshukunyiswa kunye nokuvutha kwintetho ekhangayo ngakumbi.
I-TourB XD-F i-fairway woods iza kwi-wood (3 degrees of loft) kunye ne-5-wood (18 degrees). Zithengwa kwi-$ 399 nganye. bridgestonegolf.com
Ziziphi ezo doohickeys ezincinci kwisithsaba se-Wilson Staff's D300 fairway woods? I nkampani iyababiza "i-generator vortex generators." Kuyiqhinga lokuyidiza ukuphazamisa ukujikeleza kwe-air around the clubhead ngexesha le-golfer's swing ngendlela eya kunceda iqela lihambe ngokukhawuleza litshintshe. (Baya kucinga ntoni ngokulandelayo, eh?)
I-D300 fairways inobumba obuncinci, obunobumba obunxantisayo obufaka ubuso obangela ukuba kuveliswe umlinganiselo ophezulu we- CT , okubhekiselele kwisimo se-springier. Izixhobo ezikhoyo zi-degrees (3-wood), i-degrees ezingama-18 (i-5-wood) kunye nama-degrees angama-21 (i-7-wood).
I-shaft yesitrato yi-Matrix Speed ​​Rulz A-Uhlobo lwe-graphite shaft, kunye ne-Grip yi-Tour Pride Tour 25. I- MSRP yi-$ 219.99.
TaylorMade M1 kunye neM2
I-TaylorMade M2 ​​imithi engenanto. TaylorMade Golf
U-TaylorMade uhlaziye ulungelelwano lwaluthi lwe-woodway ngo-2017 ngeemodeli ezintsha ze-M1 ne-M2. Uthini umahluko phakathi kwababini?
M1 fairway: Umzekelo we-2017 M1 uya kubhenela kubadlali begalufu abathanda ukulungiswa. Unomlinganiselo wokulahla kwedwa onokukunceda i-golfer ifinyelele umgca okanye ilahleke. I-M1 nayo ine-sleeve ye-loft ukulungisa i-angle ye-loft phezulu okanye iphantsi.
I-M2 fairway: Akukho zixhobo zokulungelelanisa kule modeli, kodwa i-M2 ijolise umgama kunye nokuxolelwa ngokusebenzisa ukusetyenziswa kwe-tech umqhubi we-TaylorMade, iConverted Cone. Kwakhona ukulinganisa abaqhubi abatsha benkampani, i-M2 fairway ibonisa ukuba yiyiphi iTM ethi "i-Geocoustic design" ekuncedeni ukuphucula izandi kunye nokudumala.
I-MSRP kwi-M1 yi-$ 299.99, kwi-M2, i-$ 249.99. taylormadegolf.com
Vula iiMifanekiso zeZenzo zokuSebenza
Amanqaku e-Funny Office avela kwi-World's Snorkiest Coworkers
Iyintoni i-Riff: Yonke malunga neNgqungquthela yomculo
Iingcaphuzelo eziqabulayo ngeentliziyo